Sweden oo caawimaad lacageed siinaysa Soomaaliya | Somaliska
Dowlada Sweden ayaa sheegtay in ay 1.5 milyan oo dollar in ay ku bixineysa horumarinta xaalada bila'aadanimo ee Soomaaliya. Lacagta ayaa waxaa maamulkeeda hayn doona hayda gargaarka u qaabilsan Sweden ee lagu magacaabo SIDA ayadoo lacagta la siin doono hayda kale ee Oxfam si loogu maalgaliyo mashruucyadooda.' Lacagta ayaa ujeedkoodu yahay in lagu hormariyo beeraha ayadoo inta kalena loo isticmaali doono waxbarashada.
Dowlada Sweden ayaa sheegtay in ay 1.5 milyan oo dollar in ay ku bixineysa horumarinta xaalada bila’aadanimo ee Soomaaliya. Lacagta ayaa waxaa maamulkeeda hayn doona hayda gargaarka u qaabilsan Sweden ee lagu magacaabo SIDA ayadoo lacagta la siin doono hayda kale ee Oxfam si loogu maalgaliyo mashruucyadooda.’
Lacagta ayaa ujeedkoodu yahay in lagu hormariyo beeraha ayadoo inta kalena loo isticmaali doono waxbarashada.
Nin Soomaali ah oo xabsi lagu xukumay ka dib kufsi
Jaamacada Göteborg oo bixinaysa koorso lagu baranayo Af-Soomaaliga